Dagaal culus oo ka dhacay Baar-sanguuni | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Dagaal culus oo ka dhacay Baar-sanguuni
Dagaal culus oo ka dhacay Baar-sanguuni
Muqdisho(Halqaran.com)-Wararka ka imaanaya Gobalka jubbada hoose ayaa sheegaya, in Dagaal culus oo hubka noocyadiisa kala duwan, la isku adeegsaday uu ka dhacay duleedka magaalada kismaayo, oo ah xarunta ku meel gaarka ka ah ee jubbaland.
Dagaalkaan oo ka dhacay Baarsnguuni ayaa yimid kadib markii weerar yahanno ka tirsan allshabaab ay weerer ku soo qaadeen fariisamo ciidan oo halkaa ay ku la haayeen, ciidamada dowlada Federaalka soomaaliya.
Dhinacyada dagaalamay ayaa lagu soo waramayaa, in ay kala gaareen khasaaaro dhimasho iyo dhaawac, wallow aan la xaqiijin Karin inta uu la egyahay khasaarahaasi.
Allshabaab ayaa war ay soo saareen ku sheeegtay, in ay ku dileen 5 askari oo ah ciidamada dowlada soomaliya, 9 kalana ay ku dhaawaceen.
Saraakiisha ciidamada dowlada soomaaliya, wax war ah kama soo saarin dagaalkaasi, waxaaase jirta weeraro dhowr jeer soo noq noqday oo ka dhacay Deegaanka Baar-sanguuni ee ku yaala duleedka kismaayo, ee jubbada Hoose.